Blog - Tantaran'ny fampandrosoana ny mpanonta ary ny teknolojia fanontana ankehitriny
Ny tantaran'ny mpanonta dia tantaran'ny teknolojia avo lenta sy indostria ihany koa.
Hatramin'ny taona 1970, nipoitra ny teknolojia laser, inkjet, fanontana hafanana ary teknolojia fanontana tsy misy akony hafa. Ny fomba fandraketana hafanana an'ny loha pirinty dia nampiasaina voalohany tamin'ny milina fax tamin'ny taona 1980. Nanomboka teo dia nanomboka nalaza haingana ny lohan'ny mpanonta mafana.
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny 40 taona mahery, ny teknolojia lohan'ny fanontana hafanana dia nanjary matotra kokoa. Raha ampitahaina amin'ny fanontana inkjet sy fanontana laser, fanontana mafana, izay mampiasa fomba ara-batana sy simika samihafa hanontana tarehin-tsoratra, dia fantatra amin'ny tombony haingam-pandeha haingana, feo ambany, fanontana mazava ary fiarovana ny tontolo iainana. Miaraka amin'ireo tombony ireo, ny loha fanontam-pirinty dia nanomboka nampiasaina be tamin'ny fampiharana pirinty isan-karazany.
Ary amin'ny maha-fampahalalana elektronika anao, manatsara ny ambaratonga mandeha ho azy, ny fampivoarana ny teknolojia fanekena kaody bara, ny fari-pahaizan'ny mpanonta mafana mitombo ihany koa, efa manomboka amin'ny antontan-taratasy nentim-paharazana sy ny fax an'ny fianakaviana, haingana hatramin'ny fivarotana antsinjarany, orinasa mpamokatra indostrialy, fitaterana, lozisialy, ara-bola, tapakila amin'ny loteria, sehatry ny fampiharana matihanina toa ny fampandrosoana ara-pahasalamana.
WINPAL dia nifantoka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana mpanonta mafana, ao amin'ny indostrian'ny fanontana mafana nandritra ny taona maro, dia manana traikefa fanondranana manan-karena mihoatra ny 10 taona.
Ankehitriny izahay amin'ny alàlan'ny mpanonta WINPAL dia maodely malaza maromaro hahafantarana ny mpanonta mafana izay manana tombony inona.
WP200 Mpanonta tapakila mafana 80mm
Miaraka amin'ny fiasan'ny motera fiara
Tohano ny fanavaozana ny IAP amin'ny Internet
Tohano ny mpamily vatasaranga
Manohana ny fanovana IP manerana ny fizarana tambajotra
WP300E Fanontam-pirinty mari-pana 4 mirefy
Famolavolana bokotra humanised, fandidiana mora
Tohano ny fanontana kaody roa ＆ D
Fanontana kaody 2-inch ekonomika
Tohano ny interface Bluetooth
Kely habe, fitsitsiana toerana
WP-Q2B mpanonta finday
Tohano ny fanontana logo NV
Miaraka amin'ny herijika angovo miasa
Tohano ny maody roa Bluetooth
Tohano ny fanontana kaody 1D sy 2D marobe
Mifanaraka amin'ny Windows / IOS / Android
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba WINPAL mpanonta printy, azafady mba jereo ny tranokalanay ofisialy raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny andian-tsarimihetsika WINPAL.
Manantena ny hahita anao amin'ny herinandro aho!
80mm mpanonta fandraisana, Fanontam-pirinty fandraisam-peo 80mm, Fanontam-pirinty Thermal, Printer mpanovo, Printer finday, Printer misy Wifi,